Hiran State - News: HS:-Dalka Libiya oo la galiyey maxmiyad halka Soomaaliyana biraha loo tumanayo.
HS:-Dalka Libiya oo la galiyey maxmiyad halka Soomaaliyana biraha loo tumanayo.
HS:- Dalka Liibiya oo uu hogaaminayey mudo fog Qadafi waxaa ka dilaacay kacdoon shacab oo aan waxbo dhaamin kii ka dhacay dalka Soomaaliya 21 sano ka hor iyadoona ujeedada ugu weyn aheyd mar lee meesha ka saara xukunka Qadaafi.
Hadaba mudadii uu kacdoonka socday waxaa dhinac socday shirar badan oo ay hormuud ka ahaayeen dowladaha Ingiriiska iyo France waxaana magaalada Paris iskugu yimid hogaamiyaal kor u dhaafayo 40 dowladood oo ka kala yimid shanta qaaradood, waxaana halkaas lagu aqoonsaday mucaaradkii dagaalka kala soo horjeeday madaxweynahii geeriyooday ee dalka Libiya iyadoona la bilaabay in la bur buriyo awoodii ciidanka qaranka jamhuuriyada Libiya.
Dalka Libiya oo leys lahaa hadii Qadaafi meesha ka baxo waxaa imaan doona isbedel xaga siyaasada iyo horumarka ah bedelkeedii ma dhicin waxaana lagu mashquulay in qeyraadkii dalka Libiya la qeybsado dowlad maqaar saar ahne dalka loo dhiso. dowladaha Ingriiska iyo France ayaa u muuqda kuwa ku faa'idey dagaalkii Libiya kadib markii dalkaas awoodiisa ay Qaramada Midoobay u dhiibtay nin Biritish ah oo wadankaas hogaamin doona mudo aan si rasmi ah loo cayimin laakinse loo maleynayo iney shacabkaasi ku si jiri doonaan maxmiyada ay hada ku jiraan 10 sano.
R/waaaraha dalka Libiya oo doonayey inuu dib u soo celiyo awoodii ciidanka Libiya waxaa hada heysta caqabado ay gadaal ka fadhiyaan dowladahii bur buriyey awoodii ciidanka uu dalku lahaa waxaana hada dib loo hubeynayaa qabiilkii uu ka dhashay Qadaafi si wadanka uu uga dhaco dagaalo sokeeye si inta ay shacabka Libiya dagalamayaan qeyraadka wadankooda loo qaato iyaguna u noqdaan qaxooti laga biilo Yurub iyo America.
Hadaba Soomaaliya maxey kaka duwan tahy Libiya?
Dalka Soomaaliya shacabkiisu wax badan ayey kaka duwan yahiin Libiya waxne waa iskaka mid. waxyaabaha ay ku kala duwan yahiin waa in ay Soomaalidu ka soo daashay dagaalo sokeeye ayna joogan waqtigii ay is xisaabin lahaayeen dalkoodana dib u dhisan lahaayeen Libiyase hada ayey lugaha la gashay dagaal sokeeyo iyo bur bur. waxeysa Libiya iskaka mid yahiin in dalkooda laga helay shidaal hadana dowladahii weerarka ku qaaday Libiya sida Ingiriiska iyo France ayaa shirar la mid ah shirarkii horey loogu qabtay Libiya abaabulaya iyadoo hada Soomaalida loo iclaamiyey shir ka dhacaya London oo sida la sheegay looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa burcad badeeda waa qodobka kaliya ee banaanka la soo dhigay ilaa hada.
Laakinse shirka London qorshahiisu waa in dalka Soomaaliya la galiyo amaba loo sameeyo Caretaker Government ka hor inta uusan dibada imaan hal liitir oo shidaal ah maadama Soomaaliland iyo Puntland laga helay Batrool, halka Hiiraan,Galgaduud iyo qeybo ka mid ah gobolka Bayna laga helay macdan. sidoo kale Gaaska dabiiciga ah ayaa la sheegayaa inuu la ciir ciirayo labada Shabelle, halka beerahii iyo xoolahii uu dalku lahaane ay u dheertahay dalka oo ah mid dhinac kasta qani ka ah.
Hadaba umada Soomaaliyeed 21 sano ayey dagaal ku jirtay waligeedna shir looguma qaban dal Yurub ka mid ah maxaa hada keenaya shirkaan markii qeyb dalka ka mid ah la damcay in laga soo saaro shidaal sida Puntland la iclaamiyo?
Maxaa loo deg degayaa oo loo sugi la yahay bilaha ka dhiman xiliga kumeel gaarka ee u harsan dowladan hada jirta mise iyada maba loo aqoonsana iney tahay dowlad jirta?Burcad Badeed sow hadaba lama dagaalan aduunyadu maxuu soo siyaadinayaa shirka London hadiise dowlada kumeel gaarka ah saxiix laga doonayo maa Mogdisho loogu tago oo halkaas lagula shiro oo Soomaalida la tababaro iyagaa yaqaano sidi ay dalkooda u difaacan lahayeen?
Sikastaba dalka Libiya faraha ayuu ka baxay bal aanu aragno dalka Soomaaliya oo waayadan ay siyaasadiisa isku dhiidhiibayeen dhawr dowladood oo African ah hadana u gudbay reer Yurub meesha uu ku danbeeyo mustaqbalkiisa iyo sida ay arintaas dareen ugu muujiyaan Soomaalida.
Shirkii Kampala Acord mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxuu u horseeday qaran jab iyo inba Soomaalida wixii ay doonaan laga sameyn karo raga hogaaminaya maanta oo iyagu marna ka badin la qilaaf marne u kala dhuunta hadba meeshii shir laga iclaamiyo iyagoo hadalo is qilaafsan idaacadaha ka sheega taasi oo iyaduna jahwareer kale ku ah shacabka ay colaaduhu ragaadiyeen mudada fog.
Ugu danbeyn waxaa kaliya ee la rumeysan yahay in aysan Soomaalidu ogolaan doonin maxmiyad in dalkooda la galiyo waqti dhaw iyo mid fogba waayo waxaanba jirin hada oo ay soo saaranayaan qeyraadka wadankooda ku jira dalkoodiina dib ugu laabanayaan iney ku hoos noolaadaan dowlad ay hogaaminayaan dad aan Soomaali aheyn.
· admin on January 27 2012 11:37:20 · 0 Comments · 1941 Reads ·
14,581,091 unique visits